မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရပ်သားအစိုးရကို ဖယ်ရှားပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက် ဖမ်းဆီးထားသူ ၄၀၀ ကျော်ထက်မနည်းရှိကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေဟာ မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့်မရသလို၊ ဥပဒေနဲ့အညီ အခွင့်အရေးတွေ မရကြဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် မမေခက ပြောပြပေးပါမယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းချိန်ကစလို့ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကြမ်းမဖက်တဲ့ အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ဖမ်းဆီးထားသူ ၄၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) AAPP-B က ပြောပါတယ်။ ဖမ်းဆီးမှု အများစုဟာ အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်လို့လည်း AAPP အဖွဲ့တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်ကပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့စာရင်းကတော့ အားလုံး ၄၅၂ယောက်ရှိပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ၃၅ယောက်ပြန်လွတ်လာတာမို့ အခုစာရင်းရှိကတော့ ၄၁၇ ယောက်ကျန်ပါတယ်။ နောက် အာဏာမသိမ်းခင်မှာဖမ်းထားတာ ၆၀၁ ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၀၀၀ကျော်ရှိသွားပြီပြောလို့ရပါတယ်။"
"အဓိကကတော့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ အစိုးရအမတ်တွေ NLDကဖြစ်တဲ့ အလယ်အလတ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေ CDM လှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတဲ့ ကျောင်းဆရာတွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ ဒါတွေကို အဓိက ပစ်မှတ်ထားလုပ်နေတယ်လို့ ကျနော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့က အဓိက NLD ကိုဖြိုခွဲမယ့်ပုံစံမျိုးအဓိကလုပ်ဆောင်တာကျနော်တို့ တွေ့ရပါတယ်။ တချို့သပိတ်ထဲမှာပါတဲ့ သူတွေက ရဲစခန်းခေါ်သွားတာတို့ အဲလိုမျိုးပါတာဆိုသိရတာရှိတယ်။ နောက်တချို့သူတို့တွေ ပြန်လွတ်လာတာမျိုးလဲ ရှိပါတယ်။ နောက်အဲလိုခေါ်တာမပါတဲ့ သူတွေတော်တော်များများကျတော့ ဘယ်ကိုခေါ်သွားမှန်း ဘာကြောင့်ခေါ်သွားမှန်း အများစုကမသိကြရပါဘူး"
တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအပြင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ ဒီအထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဦးမြအေးဟာ ဆိုရင်လည်း သီတင်း ၃ ပတ်လောက် ရှိလာတဲ့အထိ အကျိုးအကြောင်း မသိရသေးဘူးလို့လည်း ဦးမြအေးရဲ့မိခင်က ပြောပါတယ်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သားဖြစ်သူအတွက် စိတ်မအေးရဘူးလို့လည်း ဦးမြအေးမိခင်က ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
" ဖမ်းထဲကခေါ်တာဘာမှ မသိရဘူး. ဘယ်မှာရှိလဲမသိဘူး။ ဘာသတင်းမှမရတာ"
CDM လို့ခေါ်တဲ့ အာဏာသိမ်းမှုကို အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေ အပါအဝင် နိုင်ငံအနှံမှာ အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးမှုတွေ ရှိနေတာပါ။ ဧရာဝတီတိုင်း၊ အင်္ဂပူမြို့နယ် မဲဇလီကုန်း တိုက်နယ်ဆေးရုံက ကလေး ၂ယောက် ဖခင် ဆရာဝန် ဒေါက်တာပြည့်ဖြိုးနိုင်ဟာ ဆိုရင်လည်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ရက်နေ့ထဲက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး မိသားစုက ခုချိန်ထိ တွေ့ခွင့်မရသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ထောင် ၃နှစ်ချနိုင်တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေနဲ့ တရားစွဲဖို့ စီစဉ်နေတယ်သာကြားသိရပြီး ရှေ့နေဖြစ်သူနဲ့ တဆင့်တွေ့ဆုံဖို့ ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ကြောင်းလည်း ဇနီးဖြစ်သူက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
"ခုချိန်ထိဖမ်းသွားတာမတွေ့ရသေးဘူး။ ဘယ်မှာလဲမသိဘူး။ ရှေ့နေနဲ့တောင်တွေ့ခွင့်မရဘူး။ ကျမတို့မှာ သူတို့လုပ်ချင်သလိုလုပ်တာ ခံနေရတယ်။ သူက CDM လုပ်တာ ရုံးစာရွက်စာတမ်းသွားယူတော့ ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့တွေ့လို့ အကြမ်းမဖက်ဖို့ပြောတာကို တချို့က ဓါတ်ပုံရိုက်သွားကြတာ။ အဲဒ့ါကို သူက လူစုပါတယ် ဆိုပြီး သဘာဝဘေးနဲ့အရေးယူမယ်လို့ပြောတာကြားတယ်။ ဒါမယ့် ခုထိသေချာကိုမသိရသေးတာပါ။ ကျမတို့မှာ မတရားကိုဖမ်းခံထားရတာပါ။ အခုကလေး အငယ်ကိုသူ့အဖေ တရားစခန်းဝင်တယ်ပြောတော့ ပြန်လာတော့မလားဘဲမေးနေတယ်။"
အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆက်လက် အရှိန်ကောင်းနေချိန်မှာပဲ ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်း ဆက်လက် ထွက်ပေါ်နေတာပါ။ ညဖက်အချိန်မတော် ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာ ဥပဒေနဲ့အညီ ခံစားခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်း AAPP အဖွဲ့ ဦးဘိုကြည်က ထောက်ပြပါတယ်။
"ဒါဟာဥပ ဒေအရမတရားဖမ်းဆီးမှုမြောက်ပါတယ်။ ဖမ်းခံရသူတွေတော်တော်များများစိုးရိမ်ရတာလို့ကျနော်တို့ သုံးသပ်လို့ရတယ်။ နောက်ပြီး ဥပဒေအရဆို ၂၄နာရီထိပိုချုပ်တာ၊ ရှေ့နေတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရတာ ဒီလိုတွေဆုံးရှုံးနေရတာရှိတယ်။ တချို့ဆို မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့် တောင်မရမို့ကျန်းမာရေးမ ကောင်းသူတွေတော်တော်စိတ်ပူနေကြရတယ်။ နေ့စဉ်သောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးပုံမှန်သောက်ရတာရှိမရှိဆိုတာက အစ ဒီလိုစိတ်ပူစရာတွေရှိလို့ ဒါတွေဟာ ဆိုးရိမ်ရတာရှိပါတယ်။ ဥပဒေအရအာဏာသိမ်းတာမတရားမှု၊ တရားမဝင် အစိုးရကလူတွေကိုမတရား ဖမ်းဆီးနေတာတွေ ဘဲဖြစ်တယ်။ တန်ဆာခံသဘောဖမ်းနေရတာတွေမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ ဒါမျိုးတွေတကယ်မလုပ်သင့်ဘူး။ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလို့တိုင်းပြည်ကောင်းလာဖို့ ထက်ဆိုးကျိုး ပို ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အာဏာသိမ်းသူတွေသိသင့်တယ်။ဒီလူတွေကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ဖို့လိုတယ် ပြည်သူဆန္ဒကို အမြန်ဆုံးလေးစားလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်"
လတ်တလော ဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူတွေ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့ တာဝန်ခံဖြေဆိုမယ့်သူ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန် အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့တွေကလည်း ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးမှုတွေအပေါ် ကန့်ကွက်ပြောဆိုထားကြသလို၊ အရပ်သားအစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေ အပါအဝင် ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ အရပျသားအစိုးရကို ဖယျရှားပွီး စဈတပျက အာဏာသိမျးခဲ့ပွီးနောကျ ဖမျးဆီးထားသူ ၄၀၀ ကြျောထကျမနညျးရှိကွောငျး နိုငျငံရေးအကဉျြးသားရေး လှုပျရှားသူတှကေ ပွောပါတယျ။ ဖမျးဆီးခံထားရသူတှဟော မိသားစုနဲ့ တှခှေ့ငျ့မရသလို၊ ဥပဒနေဲ့အညီ အခှငျ့အရေးတှေ မရကွဘူးလို့လညျး ပွောပါတယျ။ အပွညျ့အစုံကိုတော့ ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျးသတငျးထောကျ မမခေက ပွောပွပေးပါမယျ။
စဈတပျက အာဏာသိမျးခြိနျကစလို့ ဖမျးဆီးခံရသူတှနေဲ့ နောကျဆကျတှဲ အကွမျးမဖကျတဲ့ အာဏာဖီဆနျရေး လှုပျရှားမှုတှနေဲ့ ဆကျနှယျပွီး ဖမျးဆီးထားသူ ၄၀၀ ကြျော ရှိကွောငျး နိုငျငံရေးအကဉျြးသားမြား ကူညီစောငျ့ရှောကျရေးအသငျး (မွနျမာနိုငျငံ) AAPP-B က ပွောပါတယျ။ ဖမျးဆီးမှု အမြားစုဟာ အာဏာသိမျးမှုနောကျပိုငျး လှုပျရှားမှုတှနေဲ့ ဆကျနှယျနတေယျလို့လညျး AAPP အဖှဲ့တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး ဦးဘိုကွညျကပွောပါတယျ။
"ကနြျောတို့စာရငျးကတော့ အားလုံး ၄၅၂ယောကျရှိပါတယျ။ ဒီထဲမှာ ၃၅ယောကျပွနျလှတျလာတာမို့ အခုစာရငျးရှိကတော့ ၄၁၇ ယောကျကနျြပါတယျ။ နောကျ အာဏာမသိမျးခငျမှာဖမျးထားတာ ၆၀၁ ယောကျရှိတယျဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ နိုငျငံရေးအကဉျြးသား ၁၀၀၀ကြျောရှိသှားပွီပွောလို့ရပါတယျ။"
"အဓိကကတော့ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျတှေ အစိုးရအမတျတှေ NLDကဖွဈတဲ့ အလယျအလတျပိုငျး ခေါငျးဆောငျတှေ CDM လှုပျရှားမှုလုပျနတေဲ့ ကြောငျးဆရာတှေ၊ တကျကွှလှုပျရှားသူတှေ ဒါတှကေို အဓိက ပဈမှတျထားလုပျနတေယျလို့ ကနြျောတို့တှရေ့ပါတယျ။ သူတို့က အဓိက NLD ကိုဖွိုခှဲမယျ့ပုံစံမြိုးအဓိကလုပျဆောငျတာကနြျောတို့ တှရေ့ပါတယျ။ တခြို့သပိတျထဲမှာပါတဲ့ သူတှကေ ရဲစခနျးချေါသှားတာတို့ အဲလိုမြိုးပါတာဆိုသိရတာရှိတယျ။ နောကျတခြို့သူတို့တှေ ပွနျလှတျလာတာမြိုးလဲ ရှိပါတယျ။ နောကျအဲလိုချေါတာမပါတဲ့ သူတှတေျောတျောမြားမြားကတြော့ ဘယျကိုချေါသှားမှနျး ဘာကွောငျ့ချေါသှားမှနျး အမြားစုကမသိကွရပါဘူး"
တပျမတျောက အာဏာသိမျးပွီးနောကျ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၊ သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့နဲ့ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျတှအေပွငျ တကျကွှလှုပျရှားသူတှကေိုလညျး ဖမျးဆီးခဲ့တာပါ။ ဒီအထဲမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ ဦးမွအေးဟာ ဆိုရငျလညျး သီတငျး ၃ ပတျလောကျ ရှိလာတဲ့အထိ အကြိုးအကွောငျး မသိရသေးဘူးလို့လညျး ဦးမွအေးရဲ့မိခငျက ပွောပါတယျ။ ကနျြးမာရေးမကောငျးတဲ့သားဖွဈသူအတှကျ စိတျမအေးရဘူးလို့လညျး ဦးမွအေးမိခငျက ဗှီအိုအကေိုပွောပါတယျ။
" ဖမျးထဲကချေါတာဘာမှ မသိရဘူး. ဘယျမှာရှိလဲမသိဘူး။ ဘာသတငျးမှမရတာ"
CDM လို့ချေါတဲ့ အာဏာသိမျးမှုကို အကွမျးမဖကျ အာဏာဖီဆနျတဲ့ လှုပျရှားမှုနဲ့ ဆကျနှယျပွီး နိုငျငံဝနျထမျးတှေ အပါအဝငျ နိုငျငံအနှံမှာ အာဏာပိုငျတှေ ဖမျးဆီးမှုတှေ ရှိနတောပါ။ ဧရာဝတီတိုငျး၊ အင်ျဂပူမွို့နယျ မဲဇလီကုနျး တိုကျနယျဆေးရုံက ကလေး ၂ယောကျ ဖခငျ ဆရာဝနျ ဒေါကျတာပွညျ့ဖွိုးနိုငျဟာ ဆိုရငျလညျး ဖဖေျောဝါရီ ၁၁ရကျနထေဲ့က ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားခဲ့ပွီး မိသားစုက ခုခြိနျထိ တှခှေ့ငျ့မရသေးဘူးလို့ ပွောပါတယျ။ ထောငျ ၃နှဈခနြိုငျတဲ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျစီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒနေဲ့ တရားစှဲဖို့ စီစဉျနတေယျသာကွားသိရပွီး ရှနေ့ဖွေဈသူနဲ့ တဆငျ့တှဆေုံ့ဖို့ ကွိုးစားနဆေဲဖွဈကွောငျးလညျး ဇနီးဖွဈသူက ဗှီအိုအကေိုပွောပါတယျ။
"ခုခြိနျထိဖမျးသှားတာမတှရေ့သေးဘူး။ ဘယျမှာလဲမသိဘူး။ ရှနေ့နေဲ့တောငျတှခှေ့ငျ့မရဘူး။ ကမြတို့မှာ သူတို့လုပျခငျြသလိုလုပျတာ ခံနရေတယျ။ သူက CDM လုပျတာ ရုံးစာရှကျစာတမျးသှားယူတော့ ဆန်ဒပွသူတှနေဲ့တှလေို့ အကွမျးမဖကျဖို့ပွောတာကို တခြို့က ဓါတျပုံရိုကျသှားကွတာ။ အဲဒ့ါကို သူက လူစုပါတယျ ဆိုပွီး သဘာဝဘေးနဲ့အရေးယူမယျလို့ပွောတာကွားတယျ။ ဒါမယျ့ ခုထိသခြောကိုမသိရသေးတာပါ။ ကမြတို့မှာ မတရားကိုဖမျးခံထားရတာပါ။ အခုကလေး အငယျကိုသူ့အဖေ တရားစခနျးဝငျတယျပွောတော့ ပွနျလာတော့မလားဘဲမေးနတေယျ။"
အာဏာဖီဆနျရေး လှုပျရှားမှုတှနေဲ့ လမျးပျေါထှကျ ဆန်ဒပွပှဲတှေ ဆကျလကျ အရှိနျကောငျးနခြေိနျမှာပဲ ဖမျးဆီးမှုတှလေညျး ဆကျလကျ ထှကျပျေါနတောပါ။ ညဖကျအခြိနျမတျော ဥပဒမေဲ့ ဖမျးဆီးမှုတှနေဲ့ ဖမျးဆီးခံရသူတှဟော ဥပဒနေဲ့အညီ ခံစားခှငျ့တှေ ဆုံးရှုံးနရေတယျလို့လညျး AAPP အဖှဲ့ ဦးဘိုကွညျက ထောကျပွပါတယျ။
"ဒါဟာဥပ ဒအေရမတရားဖမျးဆီးမှုမွောကျပါတယျ။ ဖမျးခံရသူတှတေျောတျောမြားမြားစိုးရိမျရတာလို့ကနြျောတို့ သုံးသပျလို့ရတယျ။ နောကျပွီး ဥပဒအေရဆို ၂၄နာရီထိပိုခြုပျတာ၊ ရှနေ့တှေနေဲ့တှခှေ့ငျ့မရတာ ဒီလိုတှဆေုံးရှုံးနရေတာရှိတယျ။ တခြို့ဆို မိသားစုနဲ့တှခှေ့ငျ့ တောငျမရမို့ကနျြးမာရေးမ ကောငျးသူတှတေျောတျောစိတျပူနကွေရတယျ။ နစေ့ဉျသောကျသုံးနတေဲ့ဆေးဝါးပုံမှနျသောကျရတာရှိမရှိဆိုတာက အစ ဒီလိုစိတျပူစရာတှရှေိလို့ ဒါတှဟော ဆိုးရိမျရတာရှိပါတယျ။ ဥပဒအေရအာဏာသိမျးတာမတရားမှု၊ တရားမဝငျ အစိုးရကလူတှကေိုမတရား ဖမျးဆီးနတောတှေ ဘဲဖွဈတယျ။ တနျဆာခံသဘောဖမျးနရေတာတှမြေိုးတှတှေရေ့တယျ။ ဒါမြိုးတှတေကယျမလုပျသငျ့ဘူး။ စဈတပျကအာဏာသိမျးလို့တိုငျးပွညျကောငျးလာဖို့ ထကျဆိုးကြိုး ပို ဖွဈမယျဆိုတာ အာဏာသိမျးသူတှသေိသငျ့တယျ။ဒီလူတှကေို အမွနျဆုံးလှတျဖို့လိုတယျ ပွညျသူဆန်ဒကို အမွနျဆုံးလေးစားလိုကျနာဖို့လိုပါတယျ"
လတျတလော ဖမျးဆီးမှုတှနေဲ့ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံရသူတှေ အခှငျ့အရေး ဆုံးရှုံးမှုတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကို ဆကျသှယျမေးမွနျးရာမှာတော့ တာဝနျခံဖွဆေိုမယျ့သူ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကုလသမဂ်ဂနဲ့ အမရေိကနျ အပါအဝငျ နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝနျးနဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး လှုပျရှားမှု အဖှဲ့တှကေလညျး ဥပဒမေဲ့ ဖမျးဆီးမှုတှအေပျေါ ကနျ့ကှကျပွောဆိုထားကွသလို၊ အရပျသားအစိုးရ ခေါငျးဆောငျတှေ အပါအဝငျ ဖမျးဆီးထားသူတှကေို ပွနျလှတျပေးဖို့လညျး တောငျးဆိုထားပါတယျရှငျ။